Umgaqo-nkqubo waBucala-Shenzhen HONGSBELT
I-HUANAN XINHAI (SHENZHEN) TECHNOLOGY CO., LTD (“HONGSBELT”, “thina”, “thina”, okanye “yethu”) isebenzisa i-https://www.hongsbelt.com.cn/ (“iNkonzo”). Eli phepha loMgaqo-nkqubo waBucala likwazisa ngemigaqo-nkqubo yethu malunga nokuqokelela, ukusetyenziswa, kunye nokubhengezwa kwedatha yakho xa usebenzisa iNkonzo yethu kunye nokukhetha oye wanxulumana naloo datha.
Sisebenzisa idatha yakho ukubonelela kunye nokuphucula iNkonzo. Ngokusebenzisa iNkonzo, uyavumelana nokuqokelela kunye nokusetyenziswa kolwazi ngokuhambelana nalo mgaqo-nkqubo.
Sincoma ukuba ufunde lo Mgaqo-nkqubo waBucala ngokupheleleyo ukuze uqinisekise ukuba unolwazi olupheleleyo. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye iinkxalabo malunga nokusetyenziswa koLwazi lwakho loBuqu, nceda uqhagamshelane nathiinfo@hongsbelt.com.
Iindidi zeeDatha eziQokelelweyo
Siqokelela iindidi ezahlukeneyo zolwazi ngeenjongo ezahlukeneyo ukubonelela kunye nokuphucula iNkonzo yethu kuwe. Phakathi kweentlobo zeDatha yoMntu le Webhusayithi iqokelela, ngokwayo okanye ngamaqela esithathu, kukho: Iikuki, iDatha yokusetyenziswa, iiNkcukacha zoQhagamshelwano lweShishini, igama lokuqala, igama lokugqibela.
Ngelixa sisebenzisa iNkonzo yethu, sinokukucela ukuba usinike ulwazi oluthile olunokuthi lusetyenziswe ukuqhagamshelana okanye ukukuchonga ("Idatha yoBuntu"). Ulwazi olubonayo lunokuquka:
Ulwazi loqhagamshelwano lweshishini
Sisenokuthi siqokelele ulwazi malunga nokuba iNkonzo ifikelelwa kwaye isetyenziswe njani ("Idatha yokusetyenziswa"). Le Nkcukacha ingabandakanya ulwazi olufana nedilesi yeProtokholi yeIntanethi yekhompyuter yakho (umzekelo, idilesi ye-IP), uhlobo lwebrawuza, uhlobo lwebrawuza, amaphepha eNkonzo oyindwendwelayo, ixesha kunye nomhla wotyelelo lwakho, ixesha elichithwe kuloo maphepha, awodwa. izichazi zesixhobo kunye nezinye iinkcukacha zokuxilonga.
Siyiqokelela njani idatha yakho?
Unika inkampani yethu ngokuthe ngqo uninzi lwedatha esiyiqokelelayo.
Siqokelela idatha kwaye siqhuba idatha xa:
Sebenzisa okanye ujonge iwebhusayithi yethu usebenzisa iikuki zesikhangeli sakho.
Ngokuzithandela ugqibezele uphando lwabathengi okanye unike ingxelo kuyo nayiphi na ibhodi yemiyalezo yethu okanye nge-imeyile.
I-Hongsbelt isebenzisa idatha eqokelelweyo ngeenjongo ezahlukeneyo:
Ukubonelela nokugcina iNkonzo
Ukukwazisa malunga notshintsho kwiNkonzo yethu
Ukukuvumela ukuba uthathe inxaxheba kwiimpawu ezisebenzisanayo zeNkonzo yethu xa ukhetha ukwenza njalo
Ukubonelela ngenkathalo yomthengi kunye nenkxaso
Ukubonelela ngohlalutyo okanye ulwazi oluxabisekileyo ukuze siphucule iNkonzo
Ukubeka iliso ekusetyenzisweni kweNkonzo
Ukubona, ukuthintela kunye nokujongana nemiba yobugcisa
Siyigcina njani idatha yakho?
I-Hongsbelt iya kuthatha onke amanyathelo ayimfuneko ngokufanelekileyo ukuqinisekisa ukuba idatha yakho iphathwa ngokukhuselekileyo kwaye ngokuhambelana nalo Mgaqo-nkqubo waBucala. Idatha yakho yoBuqu iya kudluliselwa kwiiseva zethu ezibekwe kwaSirayeli.
Inkampani yethu ingathanda ukukuthumelela ulwazi malunga neemveliso kunye neenkonzo zethu esicinga ukuba ungazithanda. Ukuba uvumile ukufumana imiyalezo yokuthengisa, ungasoloko uphuma emva kwexesha. Ukongeza, ukuba awusafuni kuqhagamshelwana naye ngeenjongo zokuthengisa, nceda usithumelele i-imeyile ku-info@hongsbelt.com.
Athini amalungelo akho okhuseleko lwedatha?
Singathanda ukuqiniseka ukuba uwazi ngokupheleleyo onke amalungelo akho okhuseleko lwedatha. Wonke umsebenzisi unelungelo loku kulandelayo:
Ilungelo lokufikelela: unelungelo lokucela iNkampani yethu iikopi zedatha yakho yobuqu.
Ilungelo lokulungiswa: unelungelo lokucela ukuba iHongsbelt ilungise naluphi na ulwazi okholelwa ukuba aluphelelanga.
Ilungelo lokucima: unelungelo lokucela ukuba iNkampani yethu icime idatha yakho yobuqu.
Ilungelo lokunqanda ukusetyenzwa: unelungelo lokuchasa ukusetyenzwa kwedatha yakho yobuqu yinkampani yethu.
Ilungelo lokuphatheka kwedatha: unelungelo lokucela ukuba inkampani yethu idlulisele idatha esiyiqokelele komnye umbutho, okanye ngqo kuwe.
Unokuhlaziya idatha yakho yobuqu ngokusithumelela i-imeyile: info@hongsbelt.com
Ungazikhupha kubhaliso lwee-imeyile zentengiso ngezi ndlela zilandelayo:
1) Landela imiyalelo engezantsi kwe-imeyile
2) Qhagamshelana neSebe lethu leNkonzo yabaThengi
3) Ukusithumelela umyalezo usebenzisa "ifom yoQhagamshelwano".
IHongsbelt iya kuphendula ngexesha elifanelekileyo kuzo zonke izicelo ezifanelekileyo zokujonga, ukuguqula, okanye ukucima idatha yobuqu.
UkuKhangela kunye neDatha yeeKuki
Sisebenzisa iikuki kunye netekhnoloji yokulandelela efanayo ukulandelela umsebenzi kwiNkonzo yethu kwaye sibambe ulwazi oluthile.
Iikuki ziifayile ezinedatha encinci enokubandakanya isiphawuli esisodwa esingaziwayo. Iikuki zithunyelwa kwisikhangeli sakho zivela kwiwebhusayithi kwaye zigcinwe kwisixhobo sakho. Iitekhnoloji zokulandela umkhondo nazo zisetyenziswa ziibhikhoni, iithegi, kunye nezikripthi zokuqokelela nokulandelela ulwazi kunye nokuphucula.
Ezi cookies ziyimfuneko ukuze iwebhusayithi isebenze kwaye ayinakucinywa kwinkqubo yethu. Unokuseta isikhangeli sakho ukuba sitshixe okanye sikwazise ngezi cookies, kodwa ke ezinye iindawo zesayithi aziyi kusebenza.
Ezi cookies ziyimfuneko ukuze iwebhusayithi isebenze kwaye ayinakucinywa kwiinkqubo zethu. Unokuseta isikhangeli sakho ukuba sikuthintele okanye sikulumkise ngezi cookies, kodwa ke ezinye iindawo zesayithi aziyi kusebenza.
Ezi cookies zinceda abanini bewebhusayithi ukuba baqonde indlela iindwendwe ezinxibelelana ngayo neewebhusayithi ngokuqokelela kunye nokuxela ulwazi. Unokuseta isikhangeli sakho ukuba singazamkeli iikuki.
Iikuki zentengiso zisetyenziselwa ukulandelela iindwendwe kwiwebhusayithi yonke. Unokuseta isikhangeli sakho ukuba singazamkeli iikuki.
Uzilawula njani iikuki?
Unokuseta isikhangeli sakho ukuba singazamkeli iikuki. Nangona kunjalo, kwiimeko ezimbalwa ezinye zeefitsha zewebhusayithi yethu zinokungasebenzi njengesiphumo.
Sinokusebenzisa abaBoneleli beNkonzo bomntu wesithathu ukubeka iliso kunye nokuhlalutya ukusetyenziswa kweNkonzo yethu. Sinokuqesha iinkampani zangaphandle kunye nabantu ngabanye ukuba baququzelele iNkonzo yethu ("Ababoneleli beNkonzo"), ukubonelela ngeNkonzo egameni lethu, ukwenza iinkonzo ezinxulumene neNkonzo okanye ukusinceda ekuhlalutyeni indlela iNkonzo yethu esetyenziswa ngayo.
Aba bantu besithathu banokufikelela kwiDatha yakho yoBuqu kuphela ukwenza le misebenzi egameni lethu kwaye babophelelekile ukuba bangazixeli okanye bayisebenzise nayiphi na enye injongo.
Sisebenzisa i-MailChimp njengeqonga le-imeyile yokuthengisa. Ukuba ukhetha ukubhalisa kwincwadana yethu, idilesi ye-imeyile osinika yona iya kuthunyelwa kwi-MailChimp esinika inkonzo yokuthengisa nge-imeyile. Idilesi ye-imeyile oyingenisileyo ayizukugcinwa kuvimba weenkcukacha zewebhusayithi.
Ungasoloko ukhupha ubhaliso ngokusebenzisa ikhonkco lokungabhalisi equlethwe kwincwadana yeendaba nganye ye-imeyile oyifumana kuthi.
Ngolwazi oluthe kratya malunga neendlela zabucala ze-Mailchimp, nceda undwendwele iphepha laBucala leMailchimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
Abasebenzisi banokugqiba ukuba bayazamkela okanye bayala iikuki besebenzisa iisetingi zebrawuza. La makhonkco alandelayo akuthatha akuse kumaphepha olwazi kwizikhangeli eziphambili:
• IChrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
• IFirefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox
• I-Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
Gcina ukhumbula ukuba ukuba ukhetha ukuvala iikuki, oku kunokuchaphazela okanye kuthintele imisebenzi yewebhusayithi.
Unxulumano kwezinye iiSayithi
Inkonzo yethu inokuqulatha amakhonkco kwezinye iisayithi ezingasetyenziswanga sithi. Ukuba ucofa ikhonkco lomntu wesithathu, uya kubhekiswa kwindawo yomntu wesithathu. Sikucebisa ngamandla ukuba ujonge kwakhona uMgaqo-nkqubo waBucala wayo yonke indawo oyindwendwelayo.
Asinalulawulo kwaye sithatha uxanduva lomxholo, imigaqo-nkqubo yabucala okanye izenzo zazo naziphi na iisayithi zomntu wesithathu okanye iinkonzo ezisebenzisa ulwazi olusuka kwiiseva zethu.
Utshintsho Kulo Mgaqo-nkqubo waBucala
Singawuhlaziya uMgaqo-nkqubo wethu waBucala ngamaxesha athile. Siza kukwazisa ngalo naluphi na utshintsho ngokuthumela uMgaqo-nkqubo omtsha waBucala kweli phepha.
Siza kukwazisa nge-imeyile kunye/okanye isaziso esibalulekileyo kwiNkonzo yethu, ngaphambi kokuba utshintsho lusebenze kwaye sihlaziye "umhla wokuqalisa" phezulu kulo Mgaqo-nkqubo waBucala.
Uyacetyiswa ukuba uphonononge lo Mgaqo-nkqubo waBucala ngamaxesha athile kulo naluphi na utshintsho. Utshintsho kulo Mgaqo-nkqubo waBucala luyasebenza xa lufakwe kweli phepha.
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo malunga nalo Mgaqo-nkqubo waBucala, nceda uqhagamshelane nathi nge-imeyile: info@hongsbelt.com.